fara tampon'ny Solar
Apex Solar dia mpamatsy vokatra photovoltaic manana fahaiza-manao famokarana. Ny vokatra photovoltaic an'ny Kuigu Technology dia naondrana tany amin'ny firenena maherin'ny 20 toa an'i Etazonia, Alemana, Royaume-Uni, Brezila, Afrika Atsimo sns. Ny totalin'ny fandefasana dia nahatratra 2GW, ka nahatonga azy io ho marika masoandro tian'ny mpanjifa maro.
Apex Solar dia nanolotra fitaovana famokarana mandeha ho azy hamokatra tontonana azo antoka ho an'ny mpanjifa rehetra, hahatratra 1GW ny fahaizan'ny famokarana amin'ny taona ho avy. Misy ny rafitra QC feno nihevitra ny fiandohan'ny farany. Ny akora ampiasaina rehetra dia avy amin'ny mpamatsy Tier 1, manome vokatra mitovy kalitao amin'ny marika mpamokatra modely masoandro any China miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana kokoa.
Famaritana ny vokatra M12 andian-panneaux solaire namboarina avy amin'ny sela masoandro 210mm, miaraka amin'ny MBB ...
Famaritana ny vokatra M12 andiana tontonana amin'ny masoandro novolavolaina tamin'ny sela 210mm, miaraka amin'ny MBB sy antsasaky ...
Amin'ny fampiasana M12 (210mm) wafer Part miaraka amin'ny MBB, manatsara bebe kokoa ny herinaratra Ny fahombiazana dia mety ho 21% etsy ambony Miaraka amin'ny sela 110/1-cut 110, ny teknolojia sela 1/3-cut dia manome herinaratra avo kokoa sy ambany ny mari-pana mafana
JEREO DETAILY Mifandraisa IZAO
Mampiasa M12 (210mm) wafer Part miaraka amin'ny MBB, manatsara bebe kokoa ny herinaratra
Ny fahombiazana dia mety hahazo 21% etsy ambony
Miaraka amin'ny sela tapaky ny antsapaka 132, ny haitao an'ny antsasaky ny antsasaky ny sela dia manome herinaratra ambony sy fihenan'ny mari-pana mafana
Toeram-pamokarana vaovao dia lava ...
Ny toby famokarana vaovao dia namboarina tao Yangzhou City, faritanin'i Jiangsu, Sina, izay mirefy 25000m2. Ny tsipika famokarana vaovao dia tsy mamokatra herin'ny masoandro matanjaka ...
Solar System Sy EPC Instal ...
Solar System And EPC Installation Training Mba serivisy tsara kokoa ho an'ny mpanjifanay, Apex arra ...
Fa maninona no malaza be ny tontolon'ny masoandro miaraka amin'ireo sela atsinanana atsimo？ Apex Solar ...